तयार भयो छात्रवृत्ति कार्यविधि, होला त छात्रवृत्ति वितरण विवादरहित ? | नुवागी
तयार भयो छात्रवृत्ति कार्यविधि, होला त छात्रवृत्ति वितरण विवादरहित ?
काठमाडौं ४ भदौ । कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति पाउने प्रावधानसहित महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले बनाएको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधिमा प्रत्येक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतका दरले अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
कार्यविधिमा ‘नर्सरीदेखि नै कक्षामा पहिलो हुने विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था, कक्षामा दोस्रो हुनेले आधा छात्रवृत्ति पाउने र ५० प्रतिशत छात्राले अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
महानगरले बनाएको कार्यविधिमा ३७ प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति, ३६ प्रतिशत गरिब तथा विपन्न समुदाय छात्रवृत्ति पनि निर्धारण भएको छ । कर्यविधिमा यसअघि नदिइएको मधेस आन्दोलनका घाइते पीडित परिवारलाई सन्तानलाई समेत २ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक जनआन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार, जनजाति र दलितलाई समेत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कार्य्विधिमा जनाइएको छ ।
कक्षा १० सम्म विद्यालयले निवेदन माग गरी आवश्यकताअनुसार परीक्षा लिएर, विद्यार्थीका अवस्था मूल्यांकन गरी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ ।
महानगरपालिकाको महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार भएको जनाएको छ । महाशाखाका शाखा अधिकृत बाबुराम दवाडीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार छात्रवृत्ति व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार पारेको बताए ।
कार्यविधिले ६ जनाको छात्रवृत्ति वितरण समिति र ९ सदस्यीय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ । छात्रवृत्ति वितरण समितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति, विद्यालय शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष, वडा समितिका प्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक रहन्छन् ।
कार्यविधिले छात्रवृत्ति वितरणलाई अझ चुस्त, व्यवस्थित र विवादरहित बनाउने महानगरपालिकाले अपेक्षा गरेको छ ।
विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी !